မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အဖိုးထိုက်တန်သော စကားတစ်ခွန်း. “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အဖိုးထိုက်တန်သော စကားတစ်ခွန်း.
by အား မာန် on Sunday, June 26, 2011 at 2:00am
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကြည်ညိုလေးစားသော လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် ကျနော် တော်လှန်ရေးနေ့အ တွက်အမှတ်တရ အဖြစ်ရေးရန် တပ်မ တော်နှင့်ပတ်သတ်၍ ဗိုလ်ချုပ်မိန့်မှာချက်များကို လက်လှမ်းမီသရွေ့လိုက် ရှာမိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ မိန့်ခွန်း များ၊ သူ့စာသား၊ သူ့စကား အရ ဗိုလ်ချုပ်၏ စိတ်ဓါတ်မြင့်မြတ်မှုနှင့် လေးစားအား ကျအတုယူဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်၊ ခံယူချက် များကို တွေ့ရပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်က သူ၏သားသမီးသဖွယ်ဖြစ်သော တပ်မတော်သားများကို မိန့်ခွန်းပေးရာတွင် တကယ့်ခေါင်းဆောင် ကောင်းပီသစွာ လမ်းညွှန်မှုပေး နိုင် ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ တပ်မတော်သားများအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာစိတ်၊ သူ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကြီး သိက္ခာရှိပြီး ပြည်သူ့အကျိုး၊ နိုင်ငံ့အကျိုး၊လူမျိုးအကျိုးကိုအမှန်တကယ် စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်သောတပ်မတော်ကြီးဖြစ်စေလိုသော ဆန္ဒကို သူ၏မိန့်ခွန်းများတွင် အထင်အရှား တွေ့ နိုင်သည်။ သူ၏မိန့်ခွန်းများ၌ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် အမှုထမ်းနေသော တပ်မတော်သားများပါမက အား လုံးသော ပြည်သူပြည်သားများအတွက်ပါ အဖိုးတန်အကျိုးရှိလှသည်။
ထိုသို့အမှန်တရားအတွက် ပေးဆပ်ရဲသော စိတ်ဓါတ်ရှိသူများသည် မြတ်နိုးစွာရသကိုခံစားနိုင်သည့်အပြင် ထိုစိတ်ဓါတ်မျိုးရှိသူ များနေထိုင်ရာအရပ်( သို့ ) တိုင်းနိုင်ငံသည်လည်း လူမျိုးတင့်၍ နိုင်ငံအေးချမ်းစည်ပင်မည်ဖြစ် သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုလိုသော သတ္တိမှာ အမှားကိုအမှား၊ အမှန်ကိုအမှန်ဟု ရဲရဲပြောဆိုရဲသော စိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အမှန်တရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖော်ထုတ်ရဲသော သတ္တိရှိရမည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
စစ်ပွဲဆိုသည်မှာ ပန်းနှင့်ပေါက်သော ပွဲတော်မဟုတ်ပါ။ သူသေကိုယ်သေတိုက်ခိုက်ရသော အသက်ဆုံးပါးနိုင်သည့် နေရာဖြစ်သည်။ အမှန်တရားအတွက် ကောင်းမြတ်သောတရားဥပဒေများအတွက် မိမိတာဝန်ကိုကျေပွန် ပြီး မှန်ကန်သော စိတ်သတ္တိဖြင့် ရင်ဆိုင်မှသာ တရားသော စစ်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အဖိုးအရွယ်ဖြစ်သောအိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ကြီးမဟတ္တမဂန္ဒီကြီးသည်လည်းသူ၏ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ သစ္စာ၏ စွမ်းအားကို အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်သည်ချည်းဖြစ် ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း သူ၏ ဆောင်ရွက်နည်းကို “ သစ္စဂ္ဂါဟံ ” ဟူ၍ ခေါ်သည်။ အသက်၂၀ ကျော်သာရှိသေး သောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ရင့်ကျက်မှုနှင့်အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုမှာ အံ့သြလေးစားဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။
မျှဝေသူ။---- b.s.r.o 2007